UZondo kwabazothula izinkulumo ezakhayo eMgungundlovu | News24
UZondo kwabazothula izinkulumo ezakhayo eMgungundlovu
PHOTO:facebook Pastor Sthembiso Zondo
KULINDELEKE ukuthi kugcwale phama eWinston Churchill Theatre kusasa (ngoLwesihlanu) ntambama ngesikhathi kunomcimbi wezinkulumo ezakhayo i-Be Seen Motivational Tour.
Ngokusho kukaBheki Mazeka we-Be Seen Advertising Agency okuyiyona ehlele lomcimbi balindele ukuthi amathikithi athengwe kungabi khona izihlalo ezingenamuntu.
“Sike sawenza umcimbi ofanayo eThekwini ngenyanga ka-July ePlayhouse lapho kwakugcwele khona abantu abalinganiselwa ku 3500 ngakho siyathemba ukuthi abantu baseMgungundlovu nabo bazophuma ngobuningi babo bayothenga amathikithi babe yingxenye yomcimbi wethu,” kusho uMazeka.
Lomcimbi kulindeleke ukuthi uhlolose ngoPastor uSthembiso Zondo weSoul Renaissance Ministries oke wathula izinkulumo ezakhayo kuKhozi FM. UMazeka uthe benza lomcimbi ngoba bebona ukuthi abantu bayakudinga ukuthi bahlale begqugquzelekile.
“Simema wonke umuntu ukuthi azothola ukuvuseleleka ngoba yinto sonke esiyidingayo empilweni ukuze silandele amaphupho ethu. Kulomcimbi simeme nosomabhizinisi asebephumelele ukuthi bazohlephulela isinkwa labo abanesifiso sokuthi nabo benze kangcono empilweni.”
Phakathi kwabanye okulindeleke ukuthi bashiyelane inkundla noPastor Zondo uBishop Sabelo Mdletshe, Pastor Trevor Phoswa we-God’s Victory Family Church, Moffat Ndlovu no Gcobisa Mpoto kanti uhlelo luyobe luphethwe uSya Mhlongo woKhozi FM.
Kanti kulindeleke ukuthi uSphe Ngcobo owaduma kuma Idols, Thobekile Mkhwanazi, DJ Bongs no Babo Ngcobo nabo banandise kulomcimbi. Kuyophinde kube nengxenye yosomahlaya abazoqhulula amahlaya bashiye abantu bephethwe yizisu.
Amathikithi ayatholakala eComputicket nase Shoprite ngo R150 kanti i-VIP R250, nasemnyango ayobe etholakala. Umcimbi uzoqala ngo 6 ntambama kuze kube ngu 11 ebusuku. Mayelana neminye imininingwane ngalomcimbi ungathintana no Zeps ku 073 515 0362 noma uGcobisa ku 079 307 9662.